Umvelisi kunye neFektri eKhanyayo yeEpoxy Resin Ubulumko
Amanqaku okwakha okutyala imivalo yentsimbi kunye nezikrufu
Qhuba imingxunya ngokwemigaqo → ucoce imingxunya ngebrashi kunye nesilinda somoya → uxhokonxe izixhobo zika-A no-B ngokwahlukeneyo → lungisa iglu yokutyala ngokomlinganiso wokudibanisa nokudibanisa → sebenzisa isixhobo esikhethekileyo sokufaka iglu emngxunyeni → Jikelezisa ibha yentsimbi okanye ujije emngxunyeni oPhakathi → uphilise
1. Ngokweemfuno zoyilo lobunjineli, imingxunya yokugrumba kwindawo ehambelana nezinto ezisisiseko (ezinje ngekhonkrithi). Ububanzi bomngxuma, ubunzulu bemingxunya kunye nobubanzi bebar yentsimbi kufuneka bugqitywe ziingcali okanye uvavanyo lwentsimi.
2. Sebenzisa isilinda somoya esikhethekileyo, ibrashi okanye umatshini womoya ocinezelweyo ukucoca uthuli kwibhola. Kuyacetyiswa ukuba uyiphinde ngaphandle kwamaxesha ama-3. Akufuneki kubekho uthuli namanzi emngxunyeni.
3. Dweba umphezulu wentsimbi kwaye uyisule icoceke nge-acetone okanye utywala.
4. Hlanganisa izinto u-A kunye no-B kumyinge we-2: 1 zide zifane ngokupheleleyo, kwaye uzigalele kumngxuma wesitsala-manzi.
5. Jikelezisa intsimbi uze uyifake ezantsi emngxunyeni ukuqinisekisa ukuba iglu iyaphuphuma emngxunyeni kwaye unike ingqwalasela ekuthinteleni ukuvuza kweglu. Nokuba umaleko weglu ugcwele okanye awuzukuchaphazela ngokuthe ngqo amandla okubamba.
6. Ngexesha lokunyanga, iiankile kufuneka zithintele ukuphazamiseka. Emva kwe-gelation, iya kuphiliswa ngokupheleleyo kubushushu begumbi iintsuku eziyi-1-2.
7. Jonga ujonge ukuba ngaba ukunyanga kuyinto eqhelekileyo. Imivalo yokutyala yamacandelo abalulekileyo kufuneka ifakwe kuvavanyo lokukhutshelwa esizeni ukujonga ukuba amandla okubambelela ahlangabezana neemfuno zoyilo; ulwakhiwo lwenkqubo elandelayo lunokwenziwa emva kokufumana isiqinisekiso.
Egqithileyo Isitishi seAnchor
Okulandelayo: imichiza i-anchor bolt